John Michael Osbourne, Ozzy Osbourne, onye ọbụ abụ
Ozzy Osbourne(a mụrụ dikaJohn Michael Osbourne, 3. December 1948 Aston, Birmingham) bụ onye ọbụ abụ nke Black Sabbath, nke Ozzy, Tony Iommi, Geezer Butler na Bill Ward dere. Site na 80. ụgbọ elu 20. na narị afọ gara aga na-eme ka ndị ọzọ na-eme njem ma na-enwe ihe ịga nke ọma karịa ahịa karịa izu ike Sabbath. Ọ bụ otu n'ime ndị a ma ama, kamakwa ndị na-agụ egwú na-arụ ụka kachasị mma ugbu a.
Ya na nwunye ya nke abụọ, Sharon na-ahazi mmemme metal Ozzfest kwa afọ. O nwere ụmụ ise - Jessica (1972), Louise (1975), Aimee (1983), Kelly (1984) na Jack (1985).
A mụrụ Osbourne na Birmingham, Aston, England. Nna ya bụ John Thomas "Jack" Osbourne (1915-1977) rụrụ ọrụ n'abalị na-arụ ọrụ dịka onye na-arụ ọrụ na General Electric Company plc.Nne ya, Lillian, bụ onye Katọlik na-esoteghị onwe ya, ma rụọ ọrụ na ọrụ mmepụta ụtụtụ.Osbourne bụ nke anọ n'ime ụmụ isii, nwere ụmụnne nwanyị atọ tọrọ ya na ụmụnne abụọ ndị tọrọ, Jean, Iris, Gillian, Paul, na Tony. Ezinụlọ ahụ bi n'otu obere ọnụ ụlọ abụọ dị na Lodge Road na Aston. Aha a na-akpọ "Ozzy" sitere na ụlọ akwụkwọ elementrị.
Enwere ike ịchọta ozi gbasara ya na edemede Sabbath.
Na 1970, ìgwè izu ike nke Black wepụtara otu ọba egwu nke dị otu afọ. Na Sabbath Sabbath, o weputara ngụkọta nke Nkọwa 10 nke a na-ere na nde 100 nde ụwa nile taa. Sabbath izu ike emeela ọtụtụ njegharị ụwa. Na 1974, ha na-egwu California jam tupu 250 000 Fans.
Ozzy Osbourne na Cardiff, 1981
Na 1979, ọ gara na egwu egwu. Na 1981, o wepụtara album mbụ yaBlizzard nke Ozz. N'oge na-adịghị anya, album ahụ ruru otu efere platinum anọ. N'afọ ndị 1980, o wepụtara akwụkwọ asaa, nke ọ bụla na-ere ihe nde 2. Na egwu egwu, ọ rere ọtụtụ nde albums ya na 70. Na 1983, 250 na 000 1985 na Ememe US. Na 1989 ọ rụrụ na egwu egwu egwu bara uru. Na XNUMX ọ rụrụ na Moscow Peace Festival. Ọ bụ mbụ nnukwu egwu egwu nke kpakpando dị n'ebe ọdịda anyanwụ na mpaghara nke mgbe USSR.
N'ime afọ nineties o wepụtara akwụkwọ ise. Onye ọ bụla n'ime ha aghọwo platinum dị ọtụtụ ma nwee ihe nkiri gburugburu ụwa. Na 1993, Grammy meriri "arụmọrụ kacha mma" maka "Enweghị m ike ịgbanwe ụwa".
Na 1996 tọrọ ntọala ọnụ na Sharon, nwunye ya na faili na otu onye, ​​Ozzfest, akpa mba music ememme raara nye ike na oké nkume, nke bụ ịchọ na ewebata ọhụrụ talent. Ya arụmọrụ n'oge ememme gara 1,4 nde mmadụ. Ozzfest ẹkenịmde kwa afọ. Part nke uru site Ozzfest-aga dị iche iche charities, gụnyere. Mgbe Lifebeat.
Na 2000, o nwere kpakpando ya na Hollywood Walk of Fame. 2000 natara Grammy ọzọ na ụdị ọrụ kachasị mma nke arụ ọrụ (oge a dịka onye so na Sabbath Sabbath) maka abụ "Iron Man". Osbourne bụ onye isi na-ahụ maka ngosi ihe ngosiOsbournes, nke a na agbasa site na MTV.
Na Sabbath Sabbath
Enwere ike ịchọta ozi ndị ọzọ na Discography Black Sabbath.
Nna nke Eziokwu(1971)
Sabbath Sabbath, Vol. 4(1972)
Sabbath Sabbath Bloody(1973)
Akwụsịla Mgbe Ị Ga-anwụ!(1978)
Blizzard nke Ozz(1980)
Diary nke Madman(1981)
Gwa Ekwensu(1982) - egwu egwu
Bark na Ọnwa(1983)
Randy Rhoads Tribute(1987) - egwu egwu
Enweghị Ezumike Maka Ndị Ọjọọ(1988)
Naanị sị Ozzy(1990) - egwu egwu
Ndụ & Elu(1993) - egwu egwu
Ozzman na-abịa(1997) - Mkpokọta
Obi rụrụ ala(2001)
Biri na Budokan(2002) - egwu egwu
The Essential Ozzy Osbourne(2003) - Mkpokọta
Onyeisi ọchịchịrị(2005) - Mkpokọta
N'okpuru Cover(2005) - ekpuchi album
Memoirs nke Madman(2014) - Mkpokọta
2: N'elu ala (album, Ozzy Osbourne)
3: Egwu (album, Ozzy Osbourne)
4: Enweghị Ezumike maka Ndị Ọjọọ (album, Ozzy Osbourne)
5: Blizzard nke Ozz
7: Kpoo (album)
9: Diana nke Madman
10: Ọkụ na-adịghị mma
12: Bark na Ọnwa
13: Ọ dịghị ihe ọzọ
15: Mmehie kachasị
16: Nwekota (album, Sabbath Sabbath)
17: Sabbath Sabbath, Vol. 4
19: Akwụsịla Nwụrụ Anwụ!
23: Sabbath Sabbath (abụ)
24: Ecstasy nka
25: 13 (album, Sabbath Sabbath)
26: Ụbọchị Izu Ike
27: Egwuregwu Electric Lady
35: Na-abịa na ududo
36: March na Die
38: N'okpuru Cover
39: Ihe ngosi nke Sabbath izu ike
42: Amuru Ọzọ
44: Sabbath Sabbath (album)
45: Ụmụ Nchịkọta Ụbọchị Izu Ike
46: Hero Hero Working
47: Nna-ukwu nke Eziokwu
Ozzy Osbourne (mụrụ John Michael Osbourne, 3. 1948 December Aston, Birmingham) bụ a na-agụ egwú nke British arọ metal gbalaga Black Sabbath, nke gụnyere Ozzy, Tony Iommi, Geezer Butler na Bill Ward. Site na 80. ụgbọ elu 20. na narị afọ gara aga na-eme ka ndị ọzọ na-eme njem ma na-enwe ihe ịga nke ọma karịa ahịa karịa izu ike Sabbath. Ọ bụ otu n'ime ndị a kasị mara amara ma ndị kasị controversial nkume-ọbù-abù taa.
Nwa Mmiri ozuzo bụ album studio nke Ozzy Osbourne site na 2007. Ozzy Osbourne na-ekwu na ọ bụ naanị ya ka o dere n'enweghị mmanya. The album bụ raw na ọchịchịrị na ya lyrics, ma o nwekwara ọtụtụ ballads nke Ozzy nyere nwunye ya Sharon.
N'elu ala bụ 2001 nke asatọ studio studio site na onye na-ede Bekee Ozzy Osbourne. E dekọrọ ya n'oge 2001 na Los Angeles na onye ọrụ nke Tim Palmer. The Album Album Chart họọrọ iri na itoolu na Billboard 200 na nke anọ.
Egwuregwu bụ egwu egwu egwu nke abụọ nke onye ọbụ abụ bụ Ozzy Osbourne. E wepụtara ya na March nke 1987 site na Epic Records na Columbia Records ma mepụta Max Norman. Billboard 200 bụ nke isii na chaatị Billboard 1979, na US, ọ bụ platinum abụọ. A raara album ahụ nye Randy Rhoads, bụ 1982 na 1982 guitarist maka ìgwè ndị Osbourne. Ọ nwụrụ na bọmbụ ụgbọelu dị na 1980. Ihe ndekọ a nwere ihe egwu sitere na 1981 na XNUMX.
Enweghị Ezumike maka Ndị Ọjọọ bụ Ovy Osbour nke ise studio studio nke onye na-abụ Bekee. E wepụtara ya na September nke 1988 site Epic Records na Columbia Records. Ndị na-emepụta ya bụ Roy Thomas Baker na Keith Olsen. Nke a bụ album mbụ nke onye ọbụ abụ, nke onye na-agụ egwú bụ Zakk Wylde, bụ onye mechara soro ya rụọ ọrụ ruo ọtụtụ afọ.
Egbeeluigwe nke Ozz si mpụta mbụ solo studio album site English arọ metal na-agụ egwú Ozzy Osbourne, wepụtara na 1980.Track listingSestavaOzzy Osbourne - Rhoads zpěvRandy - kytaraBob Daisley - bass, akwado vocals, gongLee Kerslake - rụọ, percussion, tubular Na, tympányDon Airey - si klávesyznovuvydání 2002Robert nke Trujillo - baskytaraMike Bordin - rụọ, percussion, timpani, gongDanny Sabre - tubular bellsMark Lennon - akwado vocals
Aha nna Osbourne nwere otutu mmadụ: Ozzy Osbourne (John Michael Osbourne, * 1948) - mbụ ihe English arọ metal zpěvákSharon Osbourne (* 1952) - nwunye Ozzy OsbourneaKelly Osbourne (* 1984) - na-agụ egwú na nwa nwaanyị nke Ozzy OsbourneaJeordie White (Jeordie Osbourne White), nwekwara Twiggy Ramirez (* 1971) - US hudebníkPodobné
Chịa bụ iri na ọhụrụ studio album site English arọ metal na-agụ egwú Ozzy Osbourne, wepụtara na June 2010.Seznam skladebSestavaOzzy Osbourne - zpěvGus G - kytaraRob "Blasko" Nicholson - baskytaraTommy Clufetos - rụọ, percussion
Sharon Rachel Osbourne (nee Arden; 9. 1952 October, Brixton, England, United Alaeze) bụ English A, na-aṅụ talent TV show, artist, music njikwa, bussinessmanka, promotérka na nwaanyị rọk egwú Ozzy Osbourne. Mbụ wee uche nke onye na-ege ntị ekele eziokwu na-egosi The Osbournes, nke soro ndụ nke ezinụlọ ya. Mgbe e mesịrị, ọ ghọrọ a onyeikpe nke ndị British, na mbụ version nke mpi The X lekọtara na American nsụgharị nke zoo America achọ talent.
Abamuru nke a kpọgara bụ nke abụọ solo studio album site English arọ metal na-agụ egwú Ozzy Osbourne, wepụtara na 1981.Seznam skladebBonus na reissue nke 20022011 'Hapụrụ Edition' diski 2Všechny songs e dere na a njem nke egbeeluigwe Ozz.SestavaOzzy Osbourne - Rhoads zpěvRandy - kytaraBob Daisley - Gong, bass, zpěvLee Kerslake - rụọ, percussion, tubular mgbịrịgba, tympányReference
"Ụzụ Ọkụ" bụ abụ onye ọbụ abụ bụ Ozzy Osbourne na-abụ abụ. Ya na ya bụ guitarist bass Bob Daisley na guitarist Randy Rhoads. E wepụtara ya na abụ onye ọbụ abụ mbụ, Blizzard nke Ozz, na 1980. Abụ bụ nke mbụ n'ime album. Daisley mere 2016 iwu megide megide Osbourne n'ihi na ọ naghị akwụ ụgwọ abụ. Guitar World akpọwo Rhoads 'onye ọ bụla na abụ dị ka onye kacha mma kacha mma n'oge niile.
Ozzfest bụ kwa afọ okirikiri nke ọtụtụ iri puku kwuru iri concerts (na 2005 - 26) ìgwè na-egwu Arọ Metal, Ike Rock, Death Metal, Hardcore na Nu Metal, mere na USA na Europe. Ndị na-ahazi na-Ozzy Osbourne na nwunye ya Sharon.
Bark na Ọnwa bụ nke atọ studio album nke onye Bekee dị egwu metal Ozzy Osbourne, wepụtara na November nke 1983. Ọ bụ album mbụ album nke Osbourne, nke na-adịghị agụnye onye na-agụ egwú Randy Rhoads, onye nwụrụ otu afọ tupu a tọhapụ ya. Mpịakọta ahụ bụ Jake E. Lee, onye na-agụ egwú, onye bụbu onye Mickey Ratt, Rough Cutt na Dio.
Enweghi Okwa Ozzy Osbourne nke isii studio. Edere ya na 1991 na A & M Studios na Devonshire Studios na Los Angeles, California. Ọ bụ Duane Baron na John Purdell dere album ahụ ma wepụta ya na September 1991 na Epic Records. Site na 2000, ihe odide ahụ rere ọtụtụ nde akwụkwọ na 4 wee nata albums atọ platinum.
Rudy Sarzo (18 November 1950 Havana, Cuba) bụ nkume siri ike Cuban na America na guitarist bass metal. Sarzo soro ọtụtụ ìgwè dị iche iche mara, gụnyere Quiet Riot, Ozzy Osbourne, Whitesnake, Manic Eden, Dio or Blue Öyster Cult.
The Ultimate Sin bụ nke anọ studio album nke onye Britain bụ onye Ozzy Osbourne. Maka oge mbụ, a hapụrụ 1986 na February site Epic Records. Ọ bụ Ron Nevison dere album ahụ. Na Billboard 200, a na-etinye album ahụ na ala nke isii.
Ịhụ bụ a ndụ album nke British arọ metal gbalaga Black Sabbath music, dere na a nyere afọ 1997 poté.Seznam skladebVšechny songs site Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler na Bill Ward, ma jinak.Disk 1 "Agha Ezi" - 8 : 28 "Behind the Wall nke ụra" - 4: 07 "NIB" - 6: 45 "Fairies eyi akpụkpọ ụkwụ" - 6: 19 "Electric olili ozu" - 5: 02 "Sweet Leaf" - 5: 07 "gburugburu Architect" - 5: 40 "n'ime oghere" - 6: 32 "Snowblind" - 6: 08Disk 2 "Sabbath ọbara Sabbath" - 4: 36 "Orchid / Jehova nke a na-World" - 7: 07 "unyi Women" - 6: 29 " Black Sabbath "- 7: 29" Iron Man "- 8: 21" Children Shiol "- 6: 30" enweghị isi "- 4: 28" emetụta akparamàgwà Man "(Osbourne, Iommi) - 5: 18" ere My Mkpụrụ Obi " (Osbourne, Iommi) - 3: 10SestavaOzzy Osbourne - zpěvTony Iommi - kytaraG eezer Butler - baskytaraBill Ward - rụọ
Black Sabbath Vol. 4 bụ aha nke abụ egwu sitere n'aka ìgwè ojii Sabbath Black Black wepụtara na 1972. Akwukwo a bu kwa oru ihe omuma n'ime mmuo nke akwukwo ndi ozo gara aga, mana ha nwere ihe ndi ohuru na ihe ndi ozo. FX na Laguna Ọpụpụ bụ naanị ihe mgbakwunye, n'adịghị ka egwu ndị ọzọ dị na ọba a.
Zakk Wylde, ezigbo aha Jeffrey Phillip Wiedlandt (* 14. 1967 January, Bayonne, New Jersey, USA) bụ American guitarist na zpěvák.20. May 1987 ghọrọ onye òtù nke ìgwè na-akwado Ozzy, Black na-agụ egwú Sabbath.Když na 1993 Ozzy mara ọkwa na njedebe nke ya egwú, o kpebiri amalite ya otu, Mpako na Otuto. Na òtù 1994, a tọhapụrụ mpịakọta Pride na Glory. A afọ mgbe e mesịrị, Ozzy laghachiri music idaha, na ọ gakwuuru akwado gbalaga.
Akwụsịla Mgbe Ị Ga-anwụ! bụ nke asatọ studio album nke British band Black Sabbath. Tinyere album ahụ, Ecstasy Technology anaghịzi enwe ihe ịga nke ọma dị ka akwụkwọ Sabbath Sabbath. Ọ bụkwa akwụkwọ ọhụrụ Black Sabbath 70. afọ na nke ikpeazụ na Ozzym.
Hey Stoopid bụ akwụkwọ iri na itoolu nke studio nke American bụ Alice Cooper, nke a tọhapụrụ na July site na 1991 na Epic Records. Pita Collins, ọtụtụ ndị ọbịa, gụnyere ndị na-agụ egwú bụ Joe Satriani, Steve Vai na Slash, bụ onye na-abụ abụ Ozzy Osbourne na onye na-agụ egwú guitar Nikki Sixx.
Sabotage bụ nke isii studio album nke Black Sabbath Band nke British. Ozzy Osbourne ajụjụ ọnụ na-emekarị mkpesa banyere afọ Tony Iommi anya na studio ndekọ malitere site na album a. N'akwụkwọ ndị gara aga, e dekọrọ Sabotage ma mepụta oge dị ukwuu, na-eme ka ọ bụrụ ihe ndekọ kachasị njọ nke e dekọrọ na ya (album mbụ ha na-efu ihe dị ka narị pound ole na ole, na ndekọ na-ewe ụbọchị ole na ole).
Mike Bordin (* 27, Nọvemba, 1962, San Francisco, California, United States) bụ onye America na-egwu egwu na onye guzobere band metal Faith No More, nke a makwaara dị ka Ozzy Osbourne. Ihe ngosi ya bụ ogologo oge na ụkọ.
"Ụbọchị Izu Ike" bụ ihe mmeghe site na akwụkwọ ọba Black Sabbath Black Black metal metal band released na 1970. Edere ndị otu a, Ozzy Osbourne onye na-agụ egwú, Tony Tony, onye guitarist Geezer Butler na Bill Ward ma mepụtara Rodger Bain.
Ecstasy Technology bụ Black Sabbath nke asaa studio album. Ọgwugwu a na Never Say Die! enweghi ihe ịga nke ọma dika akwukwo ozo nke Black Sabbath. ederede banyere ọgwụ ọjọọ, ịgba akwụna na transvestite pụtara. Enweghi ọnọdụ ikuku. "Nkume 'Rock' n 'Roll Doctor' na" Ọ dị mma "(nke a na-akpọ Bill Ward) bu ihe dị iche na mmepụta mbụ nke ìgwè ahụ. Ọzọkwa, nyocha na igodo ihe ntanetị na ndị na-emepụta ihe na-aga n'ihu ọbụna karịa albums ndị gara aga. A na-edekọ abụ ahụ bụ "Ọ Gone". Onye na-agụ egwú Czech bụ Marie Rottrova bụrụ abụ ma kpọọ abụ "Ịhụnanya, ị na-esi ísì mmiri".
13 bu akwukwo ohuru nke iri na itoolu nke Black Sabbath. Ihe ndekọ ya mere site na August 2012 ruo n'ọnwa Jenụwarị nke afọ na - esote. Site n'aka Rick Rubin, a tọhapụrụ 7. June 2013. Ọ bụ akwụkwọ mbụ ahụ kemgbe 1995, mgbe a tọhapụrụ Forbidden na nke mbụ na onye ọbụ abụ Ozzy Osbourne kemgbe 1978 mgbe Never Say Die! Mmadụ atọ n'ime ndị mbụ so n'ìgwè ahụ nọ na-akpọ egwú ahụ: Tony Guitarist guitarist, guitarist Geezer Butler na onye Osbourne ọbụ abụ. Bill Ward bụ onye na-egwu egwu bụ nchikota nke ìgwè ahụ, Brad Wilk, onye so n'Òtù Mgbochi megide Machine na Audioslave.
Ụbọchị Izu Ike bụ ụda ígwè dị arọ nke Bekee, kwenyere na ọ bụ onye nhazi ígwè dị arọ, bụ nke na-emetụta ọtụtụ ụdị ndị ọzọ. Ihe mbụ e dere: Ozzy Osbourne (ụda olu), Tony Iommi (guitar), Terrance "Geezer" Butler (bass) na Bill Ward (mkpọ).
Ụlọ ọrụ eletrik Electric Electronics bụ ụlọ ọrụ na-edekọ ihe na Greenwich Village nke dị na New York. Ọ bụ 1970 bụ onye na-egwu egwu Jimi Hendrix na onye na-ewu ụlọ ya bụ John Storyk. Na mgbakwunye na Hendrix, AC / DC, Ozzy Osbourne, Kiss, Blondie, Patti Smith, Nsogbu, Ebe Ndazi Na-eme Ihe, Mike Oldfield na Nas nọ na nke a.
Kelly Michelle Lee Osbourne (* 27 October 1984 London) bụ onye na-asụ Bekee, ada nke onye a ma ama bụ Ozzy Osbourne. O wepụtara album album atọ .DiskographyShut Up (2002) Changes (2003)
Don Airey (* 21. 1948 June, Sunderland, England) bụ a British keyboard player, onye bụ, kemgbe 2002 arụ na a nkume otu Deep Purple, dochie Jon Lorda.Tvoří na egwú Nkea ọtụtụ afọ, rụkọrọ ọrụ na egwú Gary Moore, Ozzy Osbourne, Judas Nchụàjà, Black Sabbath, Jetro Tull, Whitesnake, Colosseum II, Ajọ, Michael Schenker, Uli Jon n'Ashterọt, Rainbow, divlje jagode na Ibi dara ụda, na-rụkọrọ ọrụ na Andrew Lloyd Webber.
Ozzmosis bụ Ozzy Osbourne nke asaa studio album. Ya na ndekọ wee ebe n'oge afọ 1995 amụrụ Guillaume Gwa Studios (Paris, France) Right Track ndekọ (New York City, New York), Bearsville Studios (Woodstock, New York) na Electric Lady Studios (New York City, New York). Ọ bụ Michael Beinhorn dere album ahụ ma wepụtara ya na 1995 na October na Epic Records. Na UK ogo ọ na-etinye na 22. ebe na US na nke anọ. Alba rere ihe karịrị nde abụọ ma merie albums abụọ platinum.
Tommy Aldridge (* 15. August 1950) bụ American ike nkume na arọ metal oku igba, mara bụ dị ka onye so Black Oak Arkansas, Pat Travers Band, Ozzy Osbourne, Gary Moore, Whitesnake, Ted Nugent na ugbu a na-egwuri egwu Thin Lizzy.
Jet Records bụ obere ụlọ ọrụ mgbasa ozi Britain nke tọrọ ntọala na 1974. N'okpuru ụlọ obibi akwụkwọ a, Electric Electric Orchestra (ELO), Roy Wood, Gary Moore, Ozzy Osbourne, Riot, Magnum na ndị ọzọ ahapụla ha.
Rob Trujillo (* 23 October 1964) bụ onye ọkpụkpọ American. Ọ na-egwuri egwu ugbu a na metal Metallica. Ọ na-ama ụra na Suicidal Tendencies, Infectious Grooves, Black Label Society, na Ozzy Osbourne.
Jimmy DeGrasso (* 16 March 1963 Bethlehem, Pennsylvania, USA) bụ onye America na-agba ígwè. Na afọ 1986-2001 na-egwu na Y & T. Ọ bụkwa onye òtù Megadeth (1998-2001), Dokken (2012), ma rụọ ọrụ ọtụtụ afọ na Alice Coopera. Ebe ọ bụ na 2012 abụrụla onye so n'òtù Black Star Riders. O jikọtara ya na ndị egwu dika Ozzy Osbourne, Suicidal Tendencies na David Lee Roth.
Yana Wee a Ududo bụ iri abụọ na ise studio album site American na-agụ egwú Alice Cooper, wepụtara na 2008 na ọzọ 2010.Seznam songs "Okwu Mbido / Amaara m ebe i Ndụ" (Cooper, Sabre, Hampton) - 4: 21 "Ịbọ ọbọ bụ nke m" (& egbukpọ) (Cooper, Sabre, Hampton) - 4: 26 "Teta Nwụrụ Anwụ" (& Ozzy Osbourne) (Cooper, Osbourne Sabre) - 3: 53 "enwetaghị Me Ọ bụrụ na ị nwere ike" (Cooper, Sabre, Hampton) - 3: 15 "(na Touch na) Your nwanyị Akụkụ" (Cooper, Garric, Johnson, Kelli) - 3: 16 "ọbọp ke silk" (Cooper, Sabre, Hampton) - 4: 17 "gburu Site Ịhụnanya" (Cooper , Garric, Bacchi, Kelli) - 3: 34 "m Hungry" (Cooper, Sabre, Hampton) - 3: 58 "The nke furu" (Cooper, Kelli, Jani Lane) - 3: 21 "Nzọpụta" (Cooper, Sabre, Hampton, Fowler) - 4: 36 "m ududo / akụkụ ikpeazụ" (Cooper, Sabre, Hampton) - 5: 21SestavaAlice Cooper - vocals, akwado zpěvDanny Sabre - guitar (XNU MX 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 na 10); guitar (11); ebow (4); ala (4, 1, 3, 6, 8, na 10) piano (11); Igodo (7, 1, 3, 6, 7, 8 na 10); synthesizer (11); Nhazi Mgbanaka (4 na 10)
March na Die bụ 10. foto studio nke British heavy metal group Motörhead, e dekọrọ London na March 1992. Ọ na - egosi ike nke atọ atọ - Würzel, Lemmy, Zööm. Ugbua ahụ wepụtara otu March nke Die, nke kwụsịrị na 20. ebe ahụ British chaatị dị iche iche dị n'azụ otu Angel nke-agba chaa chaa Iron Nwata nwaanyị si 1993. Dị ka a otu bipụtara song Cat ọkọ-ekpo Oké Ọkụ na repeortoáru nke Hellraiser Ozzy Osbourne - Lemmy mate na enyi nke gbalaga Motorhead.
Planet Caravan bụ abụ ndị a na-eji ede egwú site n'aka ụda Black Black nke British. Ederede na ụda olu pụrụ iche na-emepụta ọnọdụ nrọ; rhyme Ọdịdị nwere oge ufodu ụkpụrụ na na agba-egosi dị iche iche na terrestrial na astrophysical phenomena, n'ihi ya ọ pụrụ nkewa dị ka ele mmadụ anya n'ihu ohere oké nkume. Pụtara na itunanya album paranoid nke 1970 na ọ bụ ezie na ọ bụghị tụlee Black Sabbath hit, e egwuri site American gbalaga Pantera, onye tinyere ya na ya album Far Beyond akwagharị.
N'okpuru Cover bụ akwụkwọ mpịakọta studio itoolu nke onye ọbụ abụ Britain bụ Ozzy Osbourne wepụtara na November site na 2005 na Epic Records. Onye na-emepụta ihe ya bụ Mark Hudson na ntinye ya na 134. ọkwa na Billboard 200. Na album nwere naanị mkpuchi; otu n'ime ha, "Mississippi Queen" nke si n'ugwu ahụ, dịka otu. Na egwu a, ọ na-egwu guitar Leslie West, otu onye n'Ugwu, na onye na-ede akwụkwọ. Na song "All the Dudes Dudes", ụda olu Ian Hunter na-abụ abụ n'asụsụ mbụ nke Mott the People's Group.
Discography British arọ metal gbalaga Black Sabbath.Oficiální discography skupinyStudiová albaMnoho nke ha (nke mbụ 8 na Ozzy na mbụ na nke abụọ na Diem) a na-ewere metal ochie. Ọtụtụ ndị ọzọ na (tumadi Ịmụ Mmadụ Ọzọ na ọba na Tony Martin) bụ oké kultovní.Koncertní albaKompilační albaNeoficiální / diskografieTyto ọzọ albums ndị unofficial - e nyere na mmekota management členů.1980 - Ndụ n'Ikpeazụ (1973 - Iommi, Osbourne, Butler, Ward); #5 UK. N'ikpeazụ remastered na eze tọhapụrụ ka otu onye nke abụọ diski n'Oge Gara Aga Lives.1977 - Kasịnụ Hits. Ọ bụghị a tọhapụ Kasịnụ Hits 1970-1978, nke a bụ a chịkọtara iri tracks ise ndị mbụ albums ngalaba Pieter Brueghel nke Okenye nke "El triunfo de la muerte" dị ka nkwakọ.
Mick Wall (* 23 June 1958) bụ onye na-akụ egwú Britain, onye redio na onye na-ahụ maka telivishọn na onye edemede. Ọ malitere ọrụ ya na magazin 1977 maka Sounds. Na 1983 ọ malitere ide maka Kerrang! Mgbe e mesịrị, o debara aha ya dịka onye na-ede akụkọ banyere ọtụtụ ndị na-egwu nkume dịka Ozzy Osbourne, Ọnọdụ Quo, Led Zeppelin, Iron Maiden, Guns N 'Roses ma ọ bụ Metallica.
Lee Kerslake (* 16. April 1947 na Bornemouth, Dorset, UK) bụ ndị fọdụrụ n'ezinụlọ ebre oku igba na a oké nkume mmachi Uriah Heep.Do iche iche so na November 1971, 1979 lara ezumike nká na October na ọzọ April 1982 odụk. Ọ hapụrụ ìgwè ahụ maka ihe ahụike na 2007. Tupu oge Uriah Heep ka ọ ka bụ otu n'ime ndị chi. Ọ bụ Uriah Heep Ken Hensly na David Byron na-agbapụ egwu na edemede. N'ime afọ 1979-1982 na-egwu n'egwuregwu na Black Sabbath na Ozzy Osbourne. Ọ rụrụ ọrụ dị ka a studio musician, tinyere bassist Bob Daisleyem on Ozzy si albums egbeeluigwe nke Ozz na Abamuru nke a kpọgara na arụmọrụ mesịrị ghọọ isiokwu nke ịgba akwụkwọ n'etiti ha na Ozzy Osbourne.
A mụrụ Ọzọ bụ Black Sabbath 11th studio album. Ọ bụ naanị album Ian Gillan, onye bụbu Deep Purple ọbụ abụ. Ọzọkwa, Bill Ward laghachiri na onye na-eti mkpu. The album bụ otu n'ime ihe kachasị mma na akụkọ ihe mere eme. Akpụchapụrụ nkatọ na oge ntọhapụ ma rute 4. ebe dị na Chaatị UK, nke bụ ọkwa ogo gọọmenti UK, na United States ọ rutela n'elu 40.
Bill Ward (mụrụ William Thomas Ward, 5. May 1948, Aston, Birmingham, England) bụ oku igba nke kpara British arọ metal gbalaga Black Sabbath.Ve otu egwuri rụọ ebe ya inception na 1969 ka 1980-aga na-abụ abụ na-egwu egwu n'abụ abụọ site na Black Sabbath; "Ọ dị mma," na "Ịgbagharị Chain" (album Never Say Die!).
Ụbọchị Izu Ike bụ akwụkwọ mbụ nke studio nke ndị Britain nke otu aha ahụ. E wepụtara ya na Friday, nke iri na atọ (13, February). Ọtụtụ ndị nkatọ, ọdepịakọta a, karịsịa akara egwu, bụ nke mbụ na-edekọ nke ọma. Mmetụta nke Led Zeppelin, nke kachasị mma, bụkwa ihe doro anya. Akwukwo 2003 abanyela 238. Nkọwa 500 nke kachasịa kacha mma n'oge niile na Rolling Stone magazine. Dị ka onye guitarist na onye guzobere Black Sabbath nke Tony Iommi, ìgwè ahụ dekọtara album maka otu ụbọchị 16. October 1969.
Dị nástrojeZpěvOzzy Osbourne (1969-77, 1978-79, 1985, 1997-2006, 2011-ugbu) Dave Walker (1977-78) Ronnie James Dio (1979-83, 1991-92) Ian Gillan (1982-84) David Donato (1984-85) Glenn Hughes (1985-86) Ray Gillen (1986-87) Tony Martin (1987-91, 1992-97) Rob Halford (1992: otu egwu, 2004: Ozzfest) KytaraTony Iommi (1969-2006, 2011 na, ka na-) BaskytaraGeezer Butler (1969-85, 1991-94, 1997-2006, 2011-ugbu) Dave Spitz (1985-86, 1987) Bob Daisley (1986) Jo Burt (1987-88) Laurence Cottle (1988-89) Neil Murray (1989-91, 1994-97) KlávesyGeoff Nicholls (1985-91, 1992-97) rụọ Bill Ward (1969-1980, 1982-83, 1984-85, 1994, 1997-98, 1999-2006, 2011- 2012) tartaric Appice (1980-1982, 1991-92, 1998) Bev Bevan (1983-1984, 1987) Eric My (1985-1986) Terry chimes (1987-1988) mma Powell (1988-1991, 1994-95) Bobby Rondinelli (1992-1994, 1995-97) Mike Bordin (1997) Tommy Clufetos (xNum X-ugbu) njikọ Articles
Ọrụ Class dike (Czech arụ ọrụ na klas dike) John Lennon si song si akpa album John Lennon / Plastic Ono Band mgbe ndakpọ nke The Beatles.Cover verzePíseň bụ nnọọ ewu ewu dị ka cover nsụgharị: David Bowie si gbalaga gbamgbam MachineCyndi LauperRoger TaylorMarilyn MansonNoir DésirOzzy OsbourneManic Street PreachersGreen DayScreaming TreesExterní odkazyText songs sụgharịa Czech
Master nke Adị bụ nke atọ album si kpara British arọ metal gbalaga Black Sabbath wepụtara na 1971. Na UK, 5 eruola. příčky.Na a album guitarist Tony Iommi mbụ na-ekiri ya guitar na atọ semitones ala C♯ iji belata eriri erughị ala, si otú na-emejọ mkpịsị aka ya na-egwuri mma. N'ihi nke a, ụda nke ọma "ụda" wee bụrụ ihe ịrịba ama nke ọba a.
Tribute nwere ike ịbụ: Tribute (album, Paul Motian) - album oku igba Paul Motian (1974) Tribute (album, Ozzy Osbourne) - album nke na-agụ egwú Ozzy Osbourne (1987) Tribute (album, Keith Jarrett) - album nke pianist Keith Jarrett (1989) Tribute (album, Roy Rogers) - album oku igba Roy Rogers (1991) Tribute (album, Yanni) - album musician Yanniho (1997) Tribute (album, Emilie-Claire Barlow) - album nke na-agụ egwú Emilie-Claire Barlow (2001)
John Robert "Bob" Daisley (* 13. 1950 February, Sydney, Australia) bụ Australian musician, bassist na lyricist onye rụkọrọ ọrụ na Ozzy Osbourne, Uriah Heep ma ọ bụ Gary Moore. Ọ na-arụ ọrụ ugbu a na Ndụ Ndụ.